प्रज्ञा लोकवार्ता विवेचना’ प्रकाशित - Deshko News Deshko News प्रज्ञा लोकवार्ता विवेचना’ प्रकाशित - Deshko News
प्रज्ञा लोकवार्ता विवेचना’ प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका नयाँ प्रकाशनहरू धमाधम प्रकाशित भइरहेका छन् । यसै क्रममा ‘प्रज्ञा लोकवार्ता विवेचना’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ ।
बालसाहित्य र लोकवार्ता विभागको संयोजनमा प्रा.डा. भवेश्वर पंगेनीको सम्पादनमा तयार भएको ‘प्रज्ञा लोकवार्ता विवेचना’मा इद्रियस सायलद्वारा लिखित ‘नेपालको मुस्लिम समुदायमा महिलाहरूले वाचन गर्ने लोककला’, डा. कुलराज निरौलाको ‘जानकी सीता र रामका विवाहको सन्दर्भवादी अध्ययन’, ‘डा. कान्छीमाया महर्जनको ‘लोकनाट्य जात्रामा नारी पात्र’, ‘डा. कृष्णप्रसाद न्यौपानेको ‘‘तन्त्रमन्त्र र लोक उपचार’, ‘गोविन्दप्रसाद आचार्यको ‘अपाङ्ग व्यक्तिका विषयमा बनेका लोकउखान’, ‘चन्द्रसिंह कुलुङको ‘कुलुङ जातिको नयाँ वर्षः चाक्चाकुर’, डा. जगमान गुरुङको ‘गुरुङ अन्त्य पद्धति र मृत्युपछिको संस्कार’ शीर्षक लेख प्रकाशित छन् ।
यसै गरी पुस्तकमा प्रा.डा. जीवेन्द्रदेव गिरीको ‘सरुमा रानी लोककथाको परिवेश चित्रण’, ‘दिव्यश्वरी जोशीको ‘डोटेली सांस्कृतिक सन्दर्भमा गौरापर्व’, ‘डा. धु्र्रवप्रसाद भट्टराईको ‘दलितहरूका विवाह संस्कारमा प्रयोग गरिने लोकपद्य र लोकमन्त्रहरू’, ‘प्रतिभा पुनको ‘पुन समुदयामा अमूर्त लोकसंस्कृति’ र ‘डा. भक्त राईको ‘किरात राई जातिमा प्रचलित अमूर्त संस्कृति’ शीर्षकका लेख समाविष्ट छन् ।
यस्तै प्रा.डा. भवेश्वर पंगेनीको ‘नेवारी संस्कारको व्यवहारिक परिवर्तन’, ‘भोगिराज चाम्लिङको ‘मुन्दुम र प्राकृतिक भौतिकवाद’, ‘डा. मदुसूदन गिरीको ‘ज्वाला पहाडमा कर्को गीत’, ‘यज्ञराज उपाध्यायको ‘अछामी हुड्केलीमा प्रचलित भारत–सुजा विजा रौतेला’, ‘लक्ष्मी गौतमको ‘वेदमा नारी’, ‘लक्ष्मीराज पण्डितको ‘भुओखेल (भस्सो), ‘विक्रममणि त्रिपाठीको ‘अवधी समुदायमा प्रचलित प्रदर्शनकारी कला’ र हेमन्ती केवरतको ‘केवरत लोकवार्तामा केवरत महिलाको अवस्था र भूमिका’ शीर्षक समेत गरी जम्मा २० ओटा लोकवार्ता–लेखहरू समेटिएका छन् ।
लोकवार्ताका बारेमा चाख राख्ने र यस सम्बन्धी खोज–अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि पुस्तक उपयोगी हुनेछ । ३६० पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ४०० रहेको छ ।